Home News Soomaaliland oo Mar kale Hanjabaad u dirtay Puntland
Soomaaliland oo Mar kale Hanjabaad u dirtay Puntland
Shirka golaha wasiirada Somaliland oo shalay ka qabsoomay Hargaysa ayaa qodobadii looga dooday waxaa ka mid ahaa safarka madaxwayne Gaas uu ku joogo magalada Badhan waxaana ka soobaxay qodobadan.
1.Somaliland waxa ay aaminsan tahay nabadgelyada iyo deggenaanshaha gobolka geeska Afrika, waxana ay kasoo horjeeddaa colaad iyo khal-khal nabadgelyo-darro oo ka dhaca gobolka.
2. Soomaaliya waxa ay kusoo xad-gudubtay Somaliland, iyada oo food-saare ka dhiganaysa maamul-goboleedka Soomaaliya ee Puntland, sidaynu ognahay sannadkan horraantiisii waxa yimid gobolka Badhan wasiir Federal ah oo horseeday iska hor-imaatin ciidan oo dhiig ku daatay.
3. Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay aqbashay dhexdhexaadintii IGAD, AU-da iyo wakiilka UN-ta Soomaaliya u jooga oo ahayd in colaadda la joojiyo oo maxaabiista la kala beddesho oo ay wada-hadlaan Somaliland iyo Soomaaliya, hase yeeshee, waxa caddaatay in dawladda Farmaajo ay ka go’an tahay inay dagaal joogto ah kusoo qaaddo.
Somaliland, iyada oo dabada ka riixaysa maamulka Puntland. Imaatinka Cabdiweli gaas ee Gobolka Badhan waxa uu qeexayaa faro-gelin qaawan oo siyaasadeed iyo joogtaynta colaad Somaliland ka dhan ah, sidaa daraadeed Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay go’aansatay in dalkeeda, dadkeeda iyo qaran-nimadeedaba ay difaacayso.
Previous articleToogasho ka dhacday Muqdisho
Next articleWeerar Askar Keenyaan ah Waxyeelo kasoo Gaartay oo ka dhacay Gobolka Gedo